Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe – Gulufkii Bisha Ramadaan oo Cadawga Aad Loogu Halaagay
Warbixintii Xarunta Dhexe – Gulufkii Bisha Ramadaan oo Cadawga Aad Loogu Halaagay
Posted by ONA Admin	/ July 13, 2014
Wararka nagasoo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixiyay dagaallo uu cadawga ku hoobtay oo meela kala duwan ka dhacay todobaadkii lasoo dhaafay. Warbixinta Xarunta Dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal aad u khadhaadh oo ka dhacay Boondada Qoraxay halkaasoo ciidankii joogay cagta la mariyay iyagoo laga dhigay wax bakhtiyay iyo qaar ay dhaawac kula carareen. Dagaalada socda oo ah kuwii bisha barakaysan ee Ramadaanka ayaa cadawga lagu gaadhsiiya khasaare laxaadleh, isagoo ay kaga bakhtiyeen inta la hubsaday ciidan kor u dhaafaya 60 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac intaa ka badan. Dagaalada Bisha ramadaan oo meela kala duwan oo Ogadenia ah ka socda ayay warbixintii ugu dambaysay een helnay u dhacay sidan.
7/7/14 Dagmada Danood ee Gobolka Doollo kamiin ay CWXO kaxidheen waxay ku gubeen 1 baabuur oo kuwa ciidanka gumaysiga waxaana goobta ku basbeelay baabuurkii iyo wixii saaraa oo dhan.
7/7/14 Adhicarbeed oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
7/7/14 Golwayne oo dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
7/7/14 Sulul oo dagmada Sagag ee Gobolka Nogob katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa cadawga kudhax maray waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan wali faahfaahintiisa lahaynin.
8/7/14 Haardhagax oo Dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan weerar aad ubalaadhan oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas ku sugnaa waxaa ciidanka wayaanaha goobta lagaga dilay 20 askari waxaana laga dhaawacay inkabadan 30 kale.
9/7/14 Buundada Qoraxay oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay dagaal aad u culus oo jilibka laysu aastay oo halkaas kadhacay waxaa ciidanka xooga dalka Ogadenia usuurta gashay in ay cagta mariyaan ciidankii wayaanaha ee goobtaas ku sugnaa waxaana laga dilay 40 askari 27 kalana waa laga dhaawacay.
13/7/14 Boholalay oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 4 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.